အရွယ် 145 ကို MB
downloads ရယူရန္ 89 615
နောက်ထပ်ဗားရှင်း FS2004 များအတွက်ရရှိနိုင် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
တစျခုမှာစကားလုံး: "ဝိုး !"သင် add-on တစ်ခုဟာခြင်း simulation မကြာမီဒါမွငျ့မားအချိန်မရွေးနေရာကိုကြည့်ရှုမည်မဟုတ်, စင်စစ်အရှိဆုံးဖွံ့ဖြိုးအပေါင်းတို့နှင့်တကွအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၏အရှုပ်ထွေးဆုံးအဘို့အ add-ons FSX နှင့် P3D။ အာရုံစူးစိုက်မှုရထိုက်ကြောင်းတစ်ဦးကလက်ရာ။ သင်ကိုယ်တိုင်တစ်ဦးကို manual မရှိဘဲဤစက်၏လေယာဉ်မှူးကြံဖန်မည်မဟုတ်သောကွောငျ့သင်ယူသိသာလိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ် ... သို့သော်အဘယ်အရာကိုနှစ်သက်!
အဆိုပါ Tupolev Tu-154 (ရုရှား: ТуполевТу-154) (နေတိုး code ကိုငြှိမ်းသတ်မှုမရှိခြင်း) အနှစ်လယ်ပိုင်း 1960s အတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်တဲ့ဆိုဗီယက်လေယာဉ် trijet ဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဉ်၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုဖေဖေါ်ဝါရီလ 2013 ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သည်
ဗီဒီယိုကို TU-154 B2 FSX
ဗီဒီယိုအင်ဂျင် sart တက်